मोदीलाई कोरोना संक्रमण ! « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
मोदीलाई कोरोना संक्रमण !
नेकपा सांसद अमनलाल मोदी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमित भएका छन् ।
आइतबार गरिएको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि मोदी उपचारका लागि विरानटगरस्थित विराट नर्सिङ अस्पतालभ भर्ना भएका छन् ।
मोदीका स्वकीय सचिव ताजिम अन्सारीले सुख्खा खोकी र ज्वरोको लक्षण देखिएपछि उनको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो । मोदी मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–४ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद हुन् ।
खै त गरिब र अतिविपन्नको कोरोना परीक्षण ?
सरकारले विपन्न नागरिकको कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्ने योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन गर्न सकस देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा गत २८ भदौमा बसेको बैठकले उपचार सम्बन्धमा चिह्न वा लक्षण देखिएका विपन्न नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बाँकी ५४ जिल्लाको अझै सर्वेक्षण तथ्य पहिचान हुन सकेको छैन । अन्य २८ जिल्लामा गरिब घर परिवार सर्वेक्षण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । राजधानी दैनिकबाट
प्रकाशित मिति : आश्विन ५, २०७७ सोमबार ९ : ३९ बजे